Kuremara Kwevana Kuwedzeredzwa: Hamden nhandare yekutamba yevana
Kuremara Kwevana Kuwedzeredzwa: Hamden nhandare yekutamba yevana vakaremara
Vana vane kuremara kana in mavhiripu vanofanirwa kuve nemukana wekunakidzwa nemabasa ekunze senge chero mumwe mwana kunze uko. Ndeipi nzira yakanaka yekushandisa wiricheya zviitiko zvevana munharaunda? Kuve nenhandare yekutandarira yakavakwa munharaunda yega yega iri wiricheya kufambidzana munzira dzose.
Nharaunda muHamden, Connecticut yaita chiito chakanaka nekugadzira nzvimbo yekutamba iri wiricheya kufambidzana. Nokubatanidza chidimbu chimwe nechimwe che midziyo to a ramp, "Josh's Jungle" rave nzvimbo huru yevana. Avo vari mavhiripu uye humwe hurema, vanokwanisa kunakidzwa nenzvimbo yekutamba vasinganzwe kusaririra.
Vakafemerwa naamai vakati "Pane paki yandingaendese imbwa yangu kwairi, asi kwete mwanakomana wangu", akabva aenderera mberi nekukwikwidza kuti ave nenzvimbo yekutamba yakavakirwa kuitira kuti vana vane hurema uye vasina hurema, vagone kunakidzwa zvakafanana midziyo pasina kunzwa kusaririra.
Yekutanga chinyorwa kubva kuWTNH Channel 8 News
Wiricheya-akasungwa murume kubva kuFlorida anodzika mu250 pondo lemon shark